को,रोना वि,रुद्धको औषधि सबैभन्दा पहिला नेपाललाई दिने चीनको घो,षणा…हेर्नुहोस ! – Nepal Online Khabar
को,रोना वि,रुद्धको औषधि सबैभन्दा पहिला नेपाललाई दिने चीनको घो,षणा…हेर्नुहोस !
July 31, 2020 42
पछिल्लो समय कोरोना म,हामारी वि,रुद्धको औ,षधी पत्ता लगाउन विश्वरभरका देशहरु लागिपरेका छन् ।
यसैबीच, उत्तरको छिमकेी देश चीनले को,रोनाविरुद्धको खो,पको सफल प,रीक्षण भएको भन्दै धमाधम तयार भइरहेको बताएको छ । नेपाललाई समेत उसले खुसीको खबर पठाएको छ ।
चीनले को,रोना वि,रुद्धको ल,डाइँमा सबैभन्दा पहिला नेपाल लगायत छिमेकीलाई स,हयोग गर्ने बताएको हो ।
छिमेकी देशहरुलाई स,हयोग गर्ने चीनले बताएको छ । चिनियाँ बिदेशमन्त्री वाङ यीले को,रोनासँग जुध्न नेपालसँग पनि नि,कट सहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।
चीनले को,रोना नि,यन्त्रण गर्न सफल भएको अनुभव छिमेकी देशहरुलाई बाड्न समेत चाहेको बताए ।
को,रोनावि,रुद्धको ल,डाइँमा छिमिकीहरुलाई स,हयोग गर्ने बचन दिएका वाङ यीले खोप बन्ने बि,त्तिकै नेपालसहित छिमेकी देशहरुमा आफै पुर्याइदिने बताए ।
चीनले को,भिड १९ को म,हामारी पछी पहिलो पटक आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा बोल्दै विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल लगायत पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई पनि पहिलो च,रणमै को,रोनाको खो,प पुर्याउने बताएका थिए ।
पछिल्लो पटक चीनमा को,रोनाका सं,क्रमित नभेटिएको चिनियाँ संचारमाध्यमहरुले बताएका छन् । केही दिनअघि राजधानी बेइजिङमै को,रोनाका बि,रामी भेटिएका थिए ।
चीनले को,रोना सं,क्रमणलाई ८४ हजारमै नि,यन्त्रण गरेको थियो । जसमध्ये ७८ हजार ९४४ निको भएर घर फर्किएका थिए भने ४ हजार ६३४ ले ज्या,न गु,माएका थिए ।
अहिले चीनमा ४ सय ८२ जनाले उ,पचार गरिरहेका छन् ।
यसैबीच विश्वभर १ करोड ६८ लाख ८२ हजार चार सय ११ जानमा को,रोना भा,इरस सं,क्रमण भएको पुष्टी भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सं,क्रमितमध्ये विश्वभरमा हालसम्म ६ लाख ६२ हजार ४१९ ज्यान गु,माएका छन् ।
त्यसैगरी सं,क्रमितमध्ये करिब करिब १ करोड,४ लाख व्यक्ति को,रोना जितेर घर फर्किएका छन् । चीनको वुहानबाट सुरु भएको को,रोना भाइरसको सं,क्रमण विश्वका २१६ देशमा फैलिसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।
को,रोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिका भएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको गै,रजिम्मेवारीपनकै का,रण को,रोना बढेको बताइएको छ । अमेरिकापछि ब्राजिल बढी प्रभावित भएको छ । तेस्रो स्थानमा छिमेकी भारत रहेको छ ।
यता भारतमा को,रोना भा,इरसका सं,क्रमितहरु निकै बढेका । आइतबारसम्म निरन्तर ५० हजारको हा,राहारीमा सं,क्रमित थपिँदै गइरहेकामा सोमबार भने कम सं,क्रमित भेटिएका थिए । तर बुधबार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी को,रोना सं,क्रमित भेटिएका छन् ।
बुधबार ५२ हजार २६३ जना सं,क्रमित भएका छन् । मंगलबार ४९ हजार ६३२ जना सं,क्रमित भएका थिए । सोमबार ४६ हजार ४८४ जनालाई सं,क्रमण भएको थियो ।
आइतबार ४८ हजार ९३२ जना सं,क्रमित थपिएका थिए । शनिबार ४८ हजार ४७९ जना, शुक्रबार ४८ हजार ८९२ तथा बिहीबार ४८ हजार ४४६ जना सं,क्रमित थपिएका थिए ।
अहिलेसम्म भारतमा को,रोना भा,इरस सं,क्रमित १५ लाख ८४ हजार ३८४ जना पुगेका छन् । मृ,तक ३५ हजार ३ पुगेका छन् । बुधबार ७७५ जनाको ज्या,न गएको छ । मंगलबार ७७० जनाको ज्या,न गएको थियो । सोमबार ६३६ तथा आइतबार ७०४ जनाको ज्या,न गएको थियो ।
हाल ५ लाख २७ हजार ३५५ जना सक्रिय सं,क्रमित रहेका छन् । बुधबार ३२ हजार ८२९ जनालाई निको भएको छ । मंगलबार ३५ हजार ६७१ जनालाई निको भएको थियो ।
Prevप्रधानमन्त्री ओलिले पटक-पटक धोका दिनु भयो, लात खाएँ अझै पनि लात खान तयार छु तर म पछी हटदिन !
Nextसारा नेपाली लाइ खुसिको खबर,प्रधानमन्त्री ओली दुवै पदमा सु,रक्षित सक्दो सेयर गरौ !
खाना खाने बित्तिकै गर्न नहुने ५ काम, जसले पु’र्‍याउँछ हानी…हेर्नुहोस् ।